Benishaangul Gumuz: 'Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to'annoo jala oolfaman' - BBC News Afaan Oromoo
Benishaangul Gumuz: 'Miseensonni Poolisii 10 Benishaangul to'annoo jala oolfaman'
4 Onkololeessa 2018
Miseensonni humna poolisii addaa Naannoo Benishaangul Gumuz wal dhabdee tibbana uumamee ture keessatti hirmaachaa turan 10 to'annoo jala oolfamuu itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa Godina Wallagga Bahaa Obbo Taakkalaa Tolasaa BBC'tti himan.
Wal dhabdee naannichatti uumamee tureen walqabatees namoota 75,000 qe'eefi qabeenyaa isaanii irraa buqqaasuun, lubbuu namoota baay'ee galaafatameera. Gocha kana duubas humni hidhate akka jiru namootni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun bakkeewwan garaagaraa buufatanii jiran BBC'tti himaniiru.
Humni poolisii Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaas haalicha tasgabbeessuuf yammuu gidduu galan humni hidhate dhukaasa irratti banuun miidhaa akka geessise Obbo Taakkalaan himaniiru.
Raayyaan ittisa biyyaas namoota hidhannoo guutuun dhukaasa banan kanatti marsuun namoota 10 to'achuu Obbo Taakkalaan himan.
Dabalataanis humnootiin poolisiin kunneenis to'annaa jala kan olfaman osoo mana namootaa gubuu fi qabeenya barbadeessanuu argamuun ta'ulleen dubbatan.
Qaamni hidhachuun ummata irratti dhukaasa bane kun miseensa poolisii addaa Naannoo Benishaangul Gumuz akka tahe dubbataniiru ittigaafatamaan kun.
Humni hidhannoo guutuu waliin to'annoo jala oolfame kunneen buufata raayyaa ittisa biyyaa naannichatti argamuufi kaampii saddeettaffaa jedhamuun beekamutti akka argaman himaniiru.
Obbo Taakkalaan qaama akkamiitu gocha kana qindeessaa jira kan jedhu ilaalchisee mootummaan qorannoo barbaachisaan taasisuun ol'aantummaa seeraa kabachiisuuf ni hojjetas jedhan.
Kana dhugoomsuun kan danda'amu immoo yoo uummatni qe'ee isaatti deebi'ee haalichi tasgabbaa'ee ofumaan qaama shakkamu eeruun deeggarsa taasisedha jedhan.
Haalichi ammayyuu guutummaa guutuun akka hin dhaabbannes himaniiru. Wal dhabdee kanaan namootni 75,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uun magaalaa Naqamtee fi aanaalee godina Wallaga Bahaa adda addaa keessatti deeggaramaa akka jiranis dabaluun himaniiru.
Dhimma kanaratti kan haasofsiisne Bulchaa Itti Aanaan nannoo Benishaangul Gumuz, Obbo Abarraa Baayyataa, walitti bu'iinsa kanaratti humni naannichaa tasumaan hin hirmaanne jechuu haalaniiru.
Hanga ammaatti humni addaa naannichaa kan jiru magaala Lojigaanfooy Cogee keessa, lakkoofsi isaanis meeqa akka ta'e ni beekama jedhaniiru.
Dabalataniis "Tasumaan walitti bu'iinsicha irratti humni addaa naannichaa hin hirmaanne' jechuun cimsanii dubbataniiru.
Wallaga Bahaa: ''Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 23 yoo gahu, 72,000 qe'eerraa buqqa'aniiru''
Roohiingaan waggaa lammaffaa qe'ee itti buqqaafamanii yaadatan
Balaa lolaan namootni 60 du'an